केकीलाई बिहेको चिन्ता – Mero Film
केकीलाई बिहेको चिन्ता
अभिनेत्री केकी अधिकारी । बिहेको बिषयमा चिन्ता हुने नै भयो । अविवाहित केकीको बेला पनि त भयो होला । धेरै अभिनेत्रीको बिहे भैसकेको बेला केकीलाई पनि दबाब होला । के होला होला भनेर सोधियो प्रश्न । केकीलाई भने बिहेको दबाब पनि पार गरिसकेँ भन्ने लागेको रहेछ भनेर भनौ ।
केकीले आफूले बिहेको दबाब पनि पार गरिसकेको बताइन् । केकी बिहेको बिषयमा थेत्तरो भैसकेको भनेर निर्देशक विशाल भण्डारीले जिस्काए । केकीले बिहे गर्नु भन्दा पहिला नाक छेड्नुपर्छ भनेर छेडिछन् । नाक छेडेपछि त भयो के के । उनको नाक पुरै सुन्नियो । केकीलाई लाग्यो लौ अब मेरो बिहे हुँदैन कि के हो ?
नाक छेड्न पाएको छैन सुन्नियो । पिलो आयो । बिहे नगर भनेको हो कि नाकले भन्ने लागेछ उनलाई । जे जे भएपनि उनले बिहेको दबाब नभएको भनेर भनिन् । केकीलाई बिहेको दबाब छैन होला कि छैन भनेर टार्न मात्र खोजेकी होलिन् ।
तर, नाक छेडेर सुन्निए पनि बिहे हुन्छ के केकीजी । आत्तिन किन परेको होला भनेर भनौ ।
२०७७ फागुन १३ गते १०:२७ मा प्रकाशित
अनी, फिल्म चै कस्तो बन्छ त मुकुन्दजी ?
के दुर्लभ नै हुन् अनमोल ?